Weather by WeatherBug: Real Time Forecast & Alerts 5.12.3-12 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.12.3-12 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ရာသီဥတု Weather by WeatherBug: Real Time Forecast & Alerts
Weather by WeatherBug: Real Time Forecast & Alerts ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
WeatherBug®, Appy ဆုပေးပွဲအားဖြင့် 2016 "အကောင်းဆုံးမိုးလေဝသ App ကို" ၏ဆုရှင် download လုပ်ပါ။
အခမဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရာသီဥတုဘူတာ၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကွန်ယက်ကိုစွမ်းအားဖြင့်အကောင်းဆုံးကိုရာသီဥတု app ကိုရယူပါ! ဤတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရာသီဥတု app ကိုအမြန်ဆုံးရာသီဥတုသတိပေးချက်များ, Real-time ရာသီဥတုအခြေအနေများ, တိကျမှန်ကန်သောအလုပ်ချိန်နာရီ & 10-တစ်ရက်ခန့်မှန်းချက် & ပိုပြီးပေးပါသည်။
Doppler ရေဒါ, ဂြိုလ်တုမြေပုံ, လျှပ်စီးသတိပေးချက်များ, မိုးရွာသွန်းမှု, အပူချိန်, လေတိုက် Chilling, အပူအညွှန်းကိန်း, ဝတ်မှုန်နှင့်ပိုပြီးအပါအဝင် 18 ရာသီဥတုကမြေပုံများ, သုံးပါ! မုန်တိုင်းသတိပေးချက်များကနေမိုးရွာရွာသတိပေးချက်ရန်, WeatherBug သင်သိထားရန်လိုအပ်သမျှကိုပေးတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရာသီဥတု Widgets တွေသင်သင့်အိမ် screen ပေါ်မှာမြင်ချင်သတိပေးချက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ်ထားကြကုန်အံ့။
ရေဒါရာသီဥတု apps များကဤလွယ်ကူသောသို့မဟုတ်အဆင်ပြေခဲ့ဖူးဘူး။ သငျသညျ WeatherBug ကိုအသုံးပြုဖို့သူအအသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာ join သည့်အခါရာသီဥတုက app ကို run နေအရှည်ဆုံး, ရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့်သိBefore®ကိုကြည့်ပါ - ယခု download လုပ်ပါ!
THE WEATHERBUG အားသာချက်
• Spark ™ Lightning သတိပေးချက်များ : အန္တရာယ်ရှိတဲ့မိုးကြိုးမုန်တိုင်းသတိပေးချက်များကိုရယူပါ & ပြင်းထန်ရာသီဥတုအခြေအနေအတှကျပွငျဆငျ
• Professional ကမိုးလေဝသကွန်ယက် : မြောက်အမေရိကတွင်အကြီးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်တန်းရာသီဥတုဘူတာအစီရင်ခံစာ Hyper-ဒေသခံရာသီဥတုအခြေအနေကို real-time အတွက်
• Animated မိုးလေဝသ Maps ကို : 18 ရာသီဥတုကမြေပုံများအားသင်မြင်သောအရာကိုရာသီဥတုအခြေအနေပေါ် options များပေး
• အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် : ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်း 2.6 ကျော်တည်နေရာများအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူပြည်ပရာသီဥတုကအဘို့ပြင်ဆင်ပါ
သင် FOR မိုးလေဝသသတင်း
• မိုးလေဝသသတင်း: သတင်းသတိပေးချက်များနှင့်ဒေသခံအခြေအနေများအကြောင်းဗွီဒီယိုများ featured
• မိုးလေဝသဒေတာများကိုစိတ်ကြိုက် : ရာသီဥတုဒေတာ Customize & သင့်ရဲ့အကြိုက်မှရာသီဥတုကအုပ်ကြွပ်ပြန်စီ
• သင်၏လူနေမှုပုံစံများအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် : အားလုံးသင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့လှုပ်ရှားမှုများများအတွက်စိတ်တိုင်းကျရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်
• လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေများ : ရီးရဲလ်အချိန်ရာသီဥတုအခြေအနေများ
• မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် : အလုပ်ချိန်နာရီယုံကြည်စိတ်ချရသော & အသေးစိတ် & 10-တစ်ရက်ခန့်မှန်းချက်
• တိုက်ရိုက် Doppler Radar : မိုးရွာသွန်းမှုသတင်းအချက်အလက်များအတွက် Doppler ရေဒါကာတွန်း
• Wind ခန့်မှန်းချက် : နေ့ကိုတဆင့်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုလေတိုက်အခြေအနေကိုကြည့်ပါ
• မိုးလေဝသအသိပေးချက်များ : သင်၏အကြောင်းကြားစာများဧရိယာ၌ရာသီဥတုအခြေအနေကိုကြည့်ပါ & သတိပေးချက်များလက်ခံရရှိ
• ပြင်းထန်သောမိုးလေဝသသတိပေးချက်များ : WeatherBug, အ NWS & NOAA ကနေပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုသတိပေးချက်များကိုရယူပါ
AIR အရည်အသွေး, ဓာတ်မတည် & နောက်ထပ်
• Precise မိုးလေဝသအသေးစိတ် : လေတိုက်နှုန်း, ခရမ်းလွန်အညွှန်းကိန်း, ရာသီဥတုလေ့လာတွေ့ရှိချက် & ပိုပြီး Get
• ဟာရီကိန်းစင်တာကို : သင့်ဖုန်းမှ Track ဟာရီကိန်း။ မုန်တိုင်းသတိပေးချက်တစ်ခုဟာရီကိန်းလမ်းမှာလျှင်သင်သိကြကုန်အံ့။
• ပိုလန်အရေအတွက် : ဒေသခံ & အမျိုးသားရေးဝတ်မှုန်ရေတွက် & ဒေတာ
• အပူချိန် : ဘယ်နေရာမှာမဆိုအပူချိန် Check
• ပြည်တွင်းမိုးလေဝသ Radar: ဒေသခံရာသီဥတုအခြေအနေကိုကြည့်ပါ, ရာသီဥတုမြေပုံ & မိုးလေဝသရေဒါ
• မိုးလေဝသ Widgets : ရာသီဥတု Widgets တွေနှင့်အတူသင့်ရဲ့ home screen ကမှရာသီဥတုသတင်းအချက်အလက် Add
• Multi-ဘာသာစကားပံ့ပိုး: အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ပေါ်တူဂီ, ဂျာမန်, ပြင်သစ် & ဂျပန်
• အပူချိန်ယူနစ်: ဖာရင်ဟိုက် (° F), စင်တီဂရိတ် (ကို C °)
• Wind ယူနစ်: MPH, kph, ထုံး & MPS သည်
• ဖိအားယူနစ်: လက်မ & millibars
• မိုးလေဝသမြေပုံ : အပြန်အလှန်မြေပုံနှင့်အတူရာသီဥတုအခြေအနေများ Explore အပူချိန်, ဝတ်မှုန်အဆင့်ဆင့် & ပိုပြီး
• ဂြိုဟ်တုမြေပုံ : ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂြိုလ်တုမြေပုံနှင့်အတူအထက်မှကြည့်ရန်ရာသီဥတုဒေတာ
• Interactive မှမြေပုံ : ဂြိုဟ်တုမြေပုံသွားလာရန် & သင်တို့ပတ်လည်ရာသီဥတုအခြေအနေကြည့်ရှု
အမေရိကန် များနှင့် ဆက်စပ်.
Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုပဲ• - https://www.facebook.com/WeatherBug
• Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ - @WeatherBug
• Instagram ကိုအပေါ်ကိုအထွက် Check - @weatherbug
•တို့၏ YouTube ရာသီဥတုရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင့် Watch -
•ဘလော့ဂ်ခင်မှာကျနော်တို့ရဲ့သိ Read - http://knowbefore.weatherbug.com
သငျသညျခင်မှာကိုသိနိုင်အောင် အစစ်အမှန်အချိန်ရာသီဥတုအစီရင်ခံစာများကိုရယူပါ။ WeatherBug အကောင်းဆုံးအခမဲ့ရာသီဥတု app ကို Download လုပ်ပါ!
ဒီ app ကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက် "အကျိုးစီးပွား-အခြေပြုကြော်ငြာ" (https://www.weatherbug.com/legal/privacy#AC တွေ့မြင်)) ပါဝင်နိုင်ပါသည်နှင့် "Precise တည်နေရာဒေတာများကို" စုဆောင်းသို့မဟုတ်ဝေမျှစေခြင်းငှါ (https ကိုတွေ့မြင်: // www ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် weatherbug.com/legal/privacy#PLD) ။
Weather by WeatherBug: Real Time Forecast & Alerts အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Weather by WeatherBug: Real Time Forecast & Alerts အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Weather by WeatherBug: Real Time Forecast & Alerts အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Weather by WeatherBug: Real Time Forecast & Alerts အား အခ်က္ျပပါ
hot105 စတိုး 5.68k 1.42M
Weather by WeatherBug: Real Time Forecast & Alerts ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Weather by WeatherBug: Real Time Forecast & Alerts အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.12.3-12
ထုတ်လုပ်သူ WeatherBug by Earth Networks
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.weatherbug.com/legal/privacy
လက်မှတ် SHA1: 17:F2:26:31:79:F6:0A:CB:83:9D:2A:E8:98:B2:67:C0:E6:AF:0D:12
ထုတ်လုပ်သူ (CN): David Foelber
အဖွဲ့အစည်း (O): AWS Convergence Technologies Inc.
နယ်မြေ (L): Germantown
Weather by WeatherBug: Real Time Forecast & Alerts APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ